အချောအလှ ၂ ဦးရဲ့ လိုက်ဖက်အညီဆုံးဖြစ်လာမယ့် "Snow Eagle Lord" ကို ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်
ချိုင်းနားဖက်က ဇာတ်လမ်းတွေဟာ မင်းသား၊မင်းသမီး အဓိကဇာတ်လိုက် ၂ ‌ယောက်ရဲ့ လိုက်ဖက်မှု၊ နာမည်ကြီးကျော်ကြားမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အသစ်ရိုက်ကူးမယ့် “Snow Eagle Lord” ဇာတ်လမ်းသစ်မှာတော့ တွဲဖက် (၂) ယောက် Visual ကတော့ တကယ့်ရှယ်ပါပဲ။
မိန်းကလေး‌များရဲ့အသည်းစွဲ Xu Kai နဲ့ အလှထိပ်ခေါင်တင်လေးလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Gulinazha တို့သာ ဇာတ်လမ်းသစ်မှာ ပေါင်းစည်းကြပါပြီ။ မူရင်းဝတ္ထုကတော့ လူကြိုက်များပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် ဒီ Live Action ဇာတ်လမ်းဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျနိုင်မလားဆိုတာကို ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကြောင်း အသေးစိတ် ထွက်ရှိမလာသေးပေမဲ့ အနည်းအကျဉ်းလေး‌ကတောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီလာမြို့တော်ကြီးမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ Dongbo Xueying (Xu Kai) ဟာ မိဘတွေနဲ့ ပြုစုမှုနဲ့ ဘဝကို အေးဆေးစွာ ဖြတ်သန်းနေခဲ့သူပါ။ သို့သော်လည်း လူယုံက နောက်ကျော်ကို ဓားနဲ့ထိုးတယ်, ဆိုတဲ့အတိုင်း မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို ဦးလေးဖြစ်သူက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အားကိုးရာ မိဘတွေကို ပြန်လယ်ကယ်ဆယ်ဖို့ သိုင်းပညာကို ကျားကုတ်ကျားခဲ သင်ယူခဲ့တဲ့ Xueying ဟာ အချိန်တန်လာတော့ ကယ်ဆယ်ရေးခရီးစတင်ပါတော့တယ်။ မိဘတွေရှိရာကို စုံစမ်းခြေရာခံရင်း လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး ရေစက်ကြောင့် Yu Jingqiu (Nazha) ဆိုတဲ့ မိန်းမလှလေးနဲ့လည်း ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံမှုက သွေးရိုးသားရိုးဟုတ်ရဲ့လား? မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေကို သံသယဝင်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူဟာ ဒီကောင်‌မလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ယုံကြည်အားကိုးနိုင်ပါ့မလား? မိဘနှစ်ပါးကိုကော အသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးပမ်းမလဲ? စသဖြင့် သိုင်းကား၊မှော်ကားဆန်ဆန် စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနိုင်ပါတော့မယ်။
ရိုက်ကူးရေးကိုတော့ အောက်တိုဘာလကုန်လောက်ကတည်းက စတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပြီး အချောအမောတွဲဖက်ကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှု များစွာဖြစ်နေပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရှေးခေတ်ပုံစံကို သိုင်းပညာနဲ့နှီးနွယ်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ မြှုပ်ကွက်၊ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ လွန်စွာကြည့်ကောင်းမှာကတော့ သေချာပါတယ်။
Next အလှဘုရင်မ Kim Tae Hee က​တောင် အလှဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်က ဘယ်သူများလဲ »
Previous « Gucci အတွက် အံ့ဩဖွယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရသူ Xiao Zhan